GIS Kit, Ugu dambeyntii waxbaa ku fiican iPad - Geofumadas
Ogast, 2011 Apple - Mac, Geospatial - GIS
Ugu dambeyntii waxaan arkayaa codsi aad u soo jiidasho leh iPad ujeedkoodu yahay qabashada xogta GIS ee berrinka.
Qalabku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo wax ku ool ah, wuxuuna ka tagayaa xafaayadda codsiyada aan isku dayey sida GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS for iPad iyo GISRoam; Dambe waa xoog badan laakiin aan ku haboonayn in la shaqeeyo oo ay diiradda saaraan falanqaynta marka loo eego qabashada.
GIS Kit Waa horumar garafa.com, abuuraha qalabka GPS-ga wuxuu ka yimid laba nooc: GIS Kit iyo GIS Pro; asaas ahaan farqiga u dhaxeeya hadda waa in la xakameynayo xogta .csv, bluetooth gudbinta, wadaagista xogaha fasalka fasalka iyo dhoofinta qaabeynta faylasha; inta ka hartay farsamooyinka waxay la mid yihiin. Qiimaha Nidaamka Qalabka wuxuu ku yaallaa 99 Dollar, midka kale wuxuu ku saabsan yahay in lagu qeexo toddobaadka 5 ee xigta sida ku qoran faallooyinka qoraaga.
Aan fiirino haddii ay u qalanto:
1 Ku dhajinta xogta GIS Kit
Qaab dhismeedka ururku wuxuu ku salaysan yahay mashaariicda, ka dibna waxaa ku jiri doona lakab lagu dabooli karo mudnaanta, daahfurnaanta ama ka baxsan / la jiidashada faraha fudud. Waa mid aad u macquul ah oo sahlan, waxaad sameyn kartaa, nuqul ka qaadi kartaa, udhigi kartaa lakabyo. Waxaad sidoo kale qeexi kartaa sifooyin badan sida loo baahdo, oo ay ku jiraan nooc sawir ah; kaas oo si toos ah loo qaadi karaa haddii iPad2 loo isticmaalo ama laga doorto diiwaanka sawirka; marka la barbardhigo liiska (sanduuqa combo), boolean (sanduuqa calaamade), taariikhda, url, lambarka taleefanka, iyo kuwo kale.
Sida muuqaalka kore ee lakabyada, waa wax aad u macquul ah, waxay u oggolaaneysaa in ay doortaan ballaadhka xuduudda, midabka, nooca khadka ah hab fudud iyo muuqaal wanaagsan.
Maadaama khariidadaha asalka ah, ay ka fog tahay wixii aan filayay:
Khariidadaha Google, wadooyinka, Satellite iyo Hybrid.
Khariidadaha Bing, wadooyinka, satellite-ka iyo qaababka dusha sare.
Khariidadaha Furan iyo khariidado Furan.
Version Pro wuxuu taageeri doonaa WMS.
Sidoo kale orthophoto georefered haddii la qaado ku dhejiyay faylka kmz.
Marka ugu fiican, waxaa lagu soo rogi karaa xaansho si aad u aragto xayiraad markaad tagto garoonka iyada oo aan xiriir la leh internetka.
2 Xirfadaha xogta berrinka
Waa suurtogal in la cabbiro masaafo u dhaxaysa laba dhibcood, ama jidka weyn. Kuwani waxaa lagu soo bandhigi karaa mitir, cidhifyo, cagaha iyo maraakiibta badda.
Taageerida nidaamyada isku-duwidda ee leh lat / dheer iyo UTM. Waxa kale oo ay leedahay USNG iyo MGRS, kuwaas oo ah nidaamyada si aad ah loogu isticmaalo Maraykanka, ku dhowaad isku midka ah ee WGS84.
Meelaha ay ku yaalaan, waxay muujinaysaa xogta sida koorsada, isuduwayaasha, xawaaraha, iwm. Laakiin marka laga reebo in aad ku qabsan karto xogta GPS-ga in ay soo geliso gudaha, sababtoo ah taasi uma baahna internetka, laakiin calaamadaha caadiga ah sida GPS kasta. Xasuuso in qabsashada galka GPS aysan ahayn qiyaas saxan, laakiin celcelis ahaan taxane taxane ah oo qaab ah daroogada. GIS Kit wuxuu leeyahay fursado uu ku qabsado xogta isagoo shaandhaynaya shuruudaha.
Fiiri masaafada. Waxaad u sheegi kartaa inaanad qaadin xog haddii aysan jirin wax badan oo ka baxsan masaafad gaar ah.
Waqtigee waqtiga. Waxaa laguu sheegi karaa inaad soo qabato xogta lambarada tira kasta, iyada oo aan loo eegin haddii aysan jirin barokac.
Fiiri saxda ah. Waxaa laga yaabaa in lagu weydiisto in aad qabato macluumaadka kaliya marka taxadar dheeraad ah la dhaafo.
Qalabka xawaare sare ah. Tani waa farsamayn ay Apple u soo bandhigto barnaamijyada horumarinta codsiyada, taas oo geedi socodku uu xoogga saarayo qalabka si uu u raadiyo oo kaliya xog sax ah oo aan ahayn lacag fudud.
Qabashada waxay noqon kartaa dhibco, xariiqyo ama geeso badan, iyadoo ku xiran qaabeynta lakabka isticmaalka. Marka shayga la qabsado, guddi ayaa loo soo bandhigaa inuu galo xogta.
3 Qoraalka xogta
Marka xogta la qaato, waxaad bedeli kartaa kaliya alphanumerics laakiin sidoo kale geometries (xariiq, dhibic, garaan iyo raadinta). Xitaa, garbaha waa la gooyaa qayb ahaan GPS iyo inta kale waxay tilmaamaysaa, si aad ah loogu hawlgalo in la isku daro GPS sawirro sawir ah marka shuruudaha faahfaahinta ay u ogolaanayaan.
4 Noocyo taageero ah.
Tani waxay leedahay qaab fiican, inkastoo ay lagama maarmaan tahay in la caddeeyo in ay tahay codsi qabasho GIS ah, sidaas darteed daaweynta CAD ama falanqeynta waa in laga sameeyaa miiska.
Macluumaadka soo dejinta iyo dhoofinta ESRI (.shp), Excel (.csv), qaababka Google Earth (kml / kmz) iyo sidoo kale la helay GPS kale oo qaab beddel ah (.gpx), waxaan tixraacayaa barnaamijyadan, in kastoo ay kuwani waxaa la sameeyay iyadoo la isticmaalayo codsi GIS hadda.
KMZ kiiska xiiso leh in uu noqday meel ay wax badan soo jiidasho badan format ku SHP jir ah, waxa ay taageertaa xogta sida sawirada la xiriira beer iyo xataa orthophotos georeferenced iyo KML in file ka mid ah. format waxaa sidoo kale la aqoonsan yahay sida caadiga ah an Nice halkaas oo ay taageertaa gelinno 32, oo outperforms loox .dbf shinka hooyo inkastoo sifooyinka badan XML u baahan tahay xirfad qaar ka mid ah.
Laydhka waxaa loo wareejin karaa email, iTunes, Bluetooth iyo iCloud.
Marka la soo koobo, sida ugu fiican loo arko si aad uga faa'iidaysato iPad-ga beerta. Waxay u egtahay mid sahlan oo suuragal ah mashaariicda waxqabadka ah ee daabacaadda ay ka muhiimsan tahay sida saxda ah, sida hantida maguurtada, kaydka beeraha, sahaminta dhaqaale-bulsheed ama mashaariicda dhirta.
Waxay dhacdaa la ii sheegay in ay noqon doonto mid aad u adag haddii si aad u dalbato in a sahanka cadastral miyiga, tan iyo in golaha wasiirada lagu soo bixi karaa kayd image satellite ah, ka dibna tag eegin internet ka soo shirtagi. Meelaha qaarkood sawirkii la siiyey Google ayaa la kulmaa xaaladaha la aqbali karo ee saxda ah, si kastaba ha ahaatee, lafahaaga gaarka ah waxaa lagu dhejin karaa adeegga WMS ama faylasha kmz si aad u qaadato beerta.
Iyadoo goob la qiyaasay, dheregtaan ah tab cadastral, sawirrada la xiriira la qaadi lahaa, sawiri kartaa qaybo fotointerpretando aan u baahnayn safarka, barbaro dhismayaasha ama barkadaha, kala soocid dalagga joogto ah ama edit tab ah ee hadda jira. Waxa aanu eegi aan aad u adag in aad rights reserved dhammaan xogta kooban hab cadastre sheet badan loo a, xataa la xidhiidha fudud xogta 3G laga yaabaa in fasalada feature server la wadaago la socda.
In the case of kacdoonkii magaalo, waxaa loo isticmaali karo in lagu dhamaystiro, ilaa buuxiso dhammaan jabhada xilli iyo fasiraadda photo toy ama cabbiro lacagta hantida, barbaro dhismaha oo buuxi sahaminta cadastral ama profile-dhaqaale. Haddii aan wakhtiyadii ay farsamo hogaanka kitaabkii ku dar, ka eeg liiska codes, sawir la camera kale, ka dibna golaha wasiirada tago buuxi diiwaanka, sawiri sawir la scaler, xisaabi aagga dhisay-up, samayn xisaabta iyo Ku qor xogta nidaamka ... waxay noqon kartaa in haa, tani waxay leedahay awood.
Aynu sheegno isticmaalka qallooca kale, sababtoo ah isticmaalka me.com waxaa la samayn karaa raadinta meesha ay farsamoyaqaanadu yihiin, intee le'eg ayey lumaan, meelo aan haboonayn ... xitaa halka uu tuugga qaatay iPad-kii.
Macluumaad dheeraad ah http://giskit.garafa.com/.
Post Previous«Previous Koorsada Java si ay uga bartaan xoqidda
Post Next Toddobaadkii hore ee sawirada 13Next »
4 Jawaab "GIS Kit, ugu danbeyn waxtar u ah iPad"
qof ayaa ogyahay sida aan uga qaadayo dhibcaha shp to GIS Pro Thanks
David Uribelarrea del Val isagu wuxuu leeyahay:
Ma taqaanaa waxa saxda ah ee GPS ee shaqeynaya goobtu? Miyaa lagama maarmaan in la isbarbardhigo gps ka mid ah nooca Bad Elf ama mid ka mid ah nooca bluetooth-ga?
Waxaa la sameeyey Apple IKs SDK, oo ah interface loo yaqaan Xcode.
Maxay ahayd arjigaan loo sameeyay?